Ali's story - Telling the Real Story
Ali oo 22 jir ah ayaa ku soo barbaaray magaalo yar oo ku taal bartamaha Soomaaliya, gobolkaas oo ay dadka ku nooli ku sugnaayeen welina ay ku sii qulqulayaan hanjabaadaha Al Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjirka ah.
Si la mid ah inta badan dhallinta, Cali waxa uu maalmihiisa ku qaadan jiray inta u dhaxaysa dugsi quraanka iyo ciyaaraha kubbadda cagta. Waxaas oo dhami waxay istaageen markii, maalin uu aabbihii ka maqlay masaajidka ogaysiis ah in koox mintidiin ahi ay wiilal da'dii Cali da'doodu tahay u qorayso tababar ciidan.
"Al Shabaab ayaa nolosheena ku maamulay tuulada," ayuu yiri Cali. "Wiilasha yaryar waxaa lagu shaqaaleysiiyay si qasab ah, sidaas darteed waalidkey waxay ku qasbanaadeen inay iga badbaadiyaan taas."
Sida laga soo xigtay UNICEF, Kooxda xagjirka ah ee Al Shabaab oo soo ifbaxday 2007 ayaa ah kooxda ugu badan ee askaraysa carruurta caalamka oo dhan ee koox kasta oo xagjir ah. Carruurta ku soo korto deegaanada ay maamulaan Al Shabaab ayaa halis joogto ah ugu jira in si qasab ah loo askareeyo si ay u dagaalamaan. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in ka badan 8,000 oo caruur ah ay Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ka qorteen Soomaaliya intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2018 iyada oo tiradu ay kor u dhaaftay intii u dhaxaysay 2017 iyo 2018.
Ali ayaa ka tagay tuuladiisa sanadkii 2016. Al Shabaab ayaa la sheegay in sanadkii 2017 ay qabsadeen magaalada ugu weyn ee ku dhow halka uu Cali ka yimid iyo deegaanada ku xeeran.
Todobaad gudihiis markii lagu dhawaaqay, Cali waalidkii iyo walaalkii ka weyn ayaa isla markiiba go’aan ku gaaray in loo diro Muqdisho, safarkaas oo dhacay saq dhexe.
“Haweenka waa lagu guursadaa, wiilashii diida in ay tababarka qaataana xabsiga ayaa la dhigaa, ma sheegi karo sida aan dareemay markii aan ka tagay hooyaday iyo aabbahay oo i dhalay oo i koriyey, i badbaadiyay, oo ay ku guulaysteen in aan helo. aniga oo waddada maraya.” Ali ayaa yiri.
Labo todobaad ka dib markii uu Muqdisho soo gaaray Aabihii ayaa waxaa afduubtay kooxo hubeysan oo aan heybtooda la garaneyn. Ali oo ka walwalsanaa in afduubka lala xiriiriyo ka bixitaankiisa tuulada, Cali wuxuu u cararay dhanka Kenya, isagoo ka baqaya in kooxda xagjirka ah ay ka daba yimaadaan.
Tani waxay astaan ​​u ahayd bilawgii safarkii dhibka badnaa, ee uu ku tiirsanaa mukhalasiinta, isaga oo sii mara Kenya ilaa Koonfurta Suudaan, Suudaan, iyo ugu dambayntii Liibiya oo uu markii ugu horreysay ka war helay geerida aabihiis.
"Isla markii aan gaadhay Liibiya, telefoonkii iigu horreeyay waxa uu ahaa waalidkay. Waxay ii sheegeen geeridiisa.” Ayuu yidhi Cali. "Waa la dilay oo waxaa lagu tuuray waddada."
In kasta oo uu xaalku ku jiray, haddana warka ku saabsan geerida aabbihii ayaa si weyn u saamaysay.
“Sidee loo dareemi karaa marka uu aabbihii waayo? Kii ku soo koriyay, ku caawiyay ilaa aad ka weynaato oo aad noqoto nin dhalinyaro ah, ma sheegi kartid sida ay tahay" ayuu yidhi. “Waxaa i garaacayay mukhalasiinta. Laakiin maalintii la ii sheegay dhimashadiisa aad baan isu beddelay oo aan ilaaway garaacii iyo dhaawacii i soo gaadhay.
Dalka Liibiya, waxaa xilliyo kala duwan gacanta ku hayay saddex nin oo tahriibin ah, kuwaasoo ku sugnaa magaalada caanka ah ee Bani Waliid ee waqooyi-galbeed. Mar haddii uu awoodi waayay in uu bixiyo lacagaha madax furashada ah ee ay doonayeen dadka wax tahriibiya, waxaa loo geystay jir dil, mararka qaarna waxaa lagu qasbay in uu ka shaqeeyo goobo dhismo ah, isagoo aan wax mushaar ah qaadan. Waxa uu goob joog u ahaa dhimashada dadka ku xeeran oo silic, gaajo, iyo xanuun la ildaran.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nimankii wax ka ganacsan jiray ay garaaceen ilaa uu ka baxay, kadibna ay meydkiisa tuureen, iyagoo u qaatay inuu dhintay.
"Runtii waxaan rumaysnaa inaan dhimanayo," Cali ayaa yidhi.
Maalin maalmaha ka mid ah, ciidamada Liibiya ayaa weerar ku qaaday hoygii ay ku jireen mukhalasiinta, iyagoo soo daayay qof kasta oo la qabtay. Maamulka ayaa u kaxeeyay xafiiska UNHCR, halkaasi oo lagu baaray, ugu dambeyntiina loogu deeqay in laga saaro.
Ali ayaa ugu dambayntii loo daadgureeyay Niger iyada oo loo sii mariyay Hay’adda UNHCR’s Emergency Transit Mechanism (ETM) si ay u daad gureeyaan qaxootiga nugul iyo magangelyo-doonka Liibiya.
"Ma qeexi karo dareenka maalintii aan imid Niger. Waxay ii ahayd wax aan la rumaysan karin. Waligay kuma fikirin inaan Liibiya ka tago,” ayuu yidhi.
Tan iyo markii la aasaasay ETM-ka sannadkii 2017, UNHCR waxay ka daadguraysay in ka badan 4,000 oo ka mid ah qaxootiga iyo magangelyo-doonka aadka u nugul - sida Ali - oo ay u dirtay Niger iyo Rwanda oo ka yimid Liibiya, halkaas oo xalal mustaqbalka fog loogu raadinayo iyaga.
Laga bilaabo Noofambar 2021, UNHCR waxay ka diwaan galisay Libya ku dhawaad ​​41,000 qaxooti iyo magangalyo doon ah. Tiro aan la garanayn oo ka mid ah dadka walaaca leh ayaa lagu hayaa taraafikada iyo xarumaha dadka lagu hayo ee aan rasmiga ahayn. UNHCR waxay kula talisaa dadka inaysan u safrin Liibiya, oo aan ahayn waddan magangelyo.
Inkasta oo Cali uu ku jiro waddadii soo kabashada, haddana waxa uu nafsiyan ka cabanayaa khibradii uu u soo maray Liibiya. Marmar ayuu soo toosaa isagoo argagaxsan, isagoo moodaya inuu weli halkaas ku jiro.
"Runtii waxaan dareemayaa inaan cadaabta soo maray," ayuu yidhi. "Habeenada qaar, haddii aan xasuusto anigoo hurda, waan argagaxaa oo waan cabsadaa."
Maanta Cali waa guursaday wuxuuna ku nool yahay xaafadda Xamdlladaaye oo ka baxsan magaalada Niamey. Halkan, waxa uu ka helaa cunto, daryeel caafimaad iyo taageero nafsaani ah iyadoo UNHCR ay u raadinayso xal waqti dheer ah isaga.
Liban’s Story: Hardship beyond all expectations
“The most shocking thing was that before they rescued us, they started shooting at people who were struggling in the water.” Liban says he struggles with his memories, especially bodies floating in the sea. Spread the message of how dangerous the Libyan route is!